Ịkpọasị UNWTO maka WTTC gụnyere foto ịhụnanya Tweeted
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » Ịkpọasị UNWTO maka WTTC gụnyere foto ịhụnanya Tweeted
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • nzukọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa
Julia Simpson, onye isi ọhụụ maka WTTC, na Zurab Pololikashvili, onye odeakwụkwọ UNWTO, nọ na-erikọ nri ọnụ na London.
Nke a bụ ụdị ebumnuche foto onye tweet UNWTO bụ Anita Mendiratta dere.
O di nwute na nke a abụghị akụkọ zuru oke.
Ihe a na -enyo enyo bụ Maribel Rodriguez, onye osote onye isi oche maka ndị njem na njem nlegharị anya ụwa.
Ebe Saudi Arabia na-ewelite ohere mgbake njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ nke akwadoro nke ọma, amụma guzobere nke ileghara ụlọ ọrụ onwe na enweghị nhazi oge COVID-19 nke UNWTO anaghị adigide.
Mwepụ nke ịjụ WTTC site na onye odeakwụkwọ UNWTO Zurab Pololikashvili amụrụ na 1977 na Ritz Carlton Hotel Riyadh chọrọ mmezi ngwa ngwa.
Onye ndụmọdụ kachasị elu na onye ndụmọdụ maka ndị odeakwụkwọ UNWTO abụọ gara aga, Anita Mendiratta, ji foto na -enweghị obi ụtọ were were gbata na ụlọ oriri na ọ Londonụ Londonụ London dị okomoko.
Njem nlegharị anya nọ na nsogbu, na ndị niile metụtara ya na gọọmentị na -arụkọ ọrụ ọnụ bụ naanị ụzọ aga n'ihu. UNWTO bụ nnukwu ihe dị iche.
Echiche a ga -agbanwe na Saudi Arabia dị njikere ịpụta dị ka onye ndu n'ọnọdụ a ma tinye ego n'azụ ya, ọtụtụ ijeri dollar ekenyela otu aka na -enyere akụnụba njem nlegharị anya ụwa aka.
Dị ka akụkọ nledo, UNWTO Zurab Pololikashvilli, nke onye ndụmọdụ ya kachasị elu, Anita Mendiratta duziri, mere ihe. Zurab na -adị mma mgbe niile idu ndú dabere na nghọta. N'iji ezigbo aha onye isi WTTC na -amaghị n'ọdịnihu, agbanyere igwe mgbasa ozi Zurab, ejide ya.
Cheta? Nke a mere na Mee 2017
Onye odeakwụkwọ ukwu nke UNWTO, Taleb Rifai, ekwupụtala ekele o nwere maka World Travel & Tourism Council (WTTC) maka njikọ siri ike dị n'etiti otu abụọ a.
N'ime afọ isii gara aga, UNWTO na WTTC ekepụtala mmekorita siri ike, na -akpọkọta ọha na nkeonwe iji kwalite njem nlegharị anya na ilebara ihe kacha mkpa anya.
N'ime otu UNWTO na WTTC Open Letter on Travel and Tourism Initiative bidoro na 2011, nkwado sitere n'aka ndị isi obodo na gọọmentị iri asatọ gburugburu ụwa. Site na atụmatụ a, UNWTO na WTTC na-achọ ịkwalite mkpa mpaghara njem na mmepe mmekọrịta ọha na ụba na ọkwa kachasị elu.
Mmekọrịta a dị n'etiti UNWTO na WTTC ka siri ike ruo na Disemba 31, 2017. N'ịghọta mkpa ọlụ mmekọrịta ọha na eze nke mpaghara ahụ, ọ dị mkpa ka onye ode akwụkwọ ukwu na-apụ apụ, Taleb Rifai, kpọọ onye isi oche WTTC ọhụrụ, Gloria. Guevara, ịga UNWTO General Assembly na Chengdu, China, na 2017.
Onye isi oche WTTC na 2017, Gloria Guevara, bụ Mịnịsta njem nlegharị anya maka Mexico na 2011. Meksiko ghọrọ mba izizi na February 2011 na Onye isi ala Mexico Calderon bịanyere aka n'akwụkwọ nkwado njem njem UNWTO/WTTC na ndị isi obodo 80 gburugburu ụwa.
Onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Mexico, Gloria Guevara, na -abịa site na ụlọ ọrụ nkeonwe, ghọtara nke ọma mkpa akụkụ abụọ (nkeonwe & nke ọha) ga -arụkọ ọrụ ọnụ.
Amabeghị na 2017 na onye odeakwụkwọ UNWTO ọhụrụ, Zurab Pololikashvili, nwere atụmatụ dị iche iche, ha etinyeghị WTTC.
Kedu ka UNWTO si gbanwee n'otu abalị na Jenụwarị 1, 2018
Na Jenụwarị 1, 2018 Zurab Pololikashvili were ọkwa UNWTO.
Afọ atọ ka e mesịrị ndị ọkachamara kwenyere, o kwesịghị inwe ike ime nke a.
UNWTO Manipulation iji kwado ntuli aka nke odeakwụkwọ ukwu Zurab Pololikashvili na-aga n'ihu.
Onye odeakwụkwọ UNWTO na-abata onye tupu ọ rụọ ọrụ maka UNWTO na-eje ozi dị ka onye nnọchi anya Madrid na obodo ya, Republic of Georgia, enweghị ahụmịhe na ngalaba nkeonwe na njem.
Ebe Zurab na -ewere ọkwa UNWTO, IATA, ICAO, na WTTC kwụsịrị ọkwa ha.
Na 2018 UNzukọ Ezumezu NWTO na St. Petersburg, Russia, Zurab wepụrụ ọtụtụ atụmatụ maka WTTC itinye aka na ebumnuche gọọmentị wee mee ka onye isi oche WTTC nọdụ n'azụ ụlọ ahụ.
Zurab gbara ihe ngosi njem Spanish ume nke ọma, FITUR, iji kpọọ WTTC oku na 2019.
Zurab chọrọ ka WTTC Global Summit na Mee 2021 na Cancun daa wee kpalie Gọọmentị Dominican Republic ka hazie ihe omume mpaghara mpaghara UNWTO iji mebie ụbọchị WTTC Summit.
N'ụzọ na -emegide onwe onye isi ụlọ ọrụ WTTC Gloria Guevara kpọrọ Zurab oku ka ọ bịa kwuo okwu na nzuko ahụ, mana, n'ezie, nke a emeghị. Ndị otu WTTC were oke iwe, tOnye minista na -ahụ maka njem maka Dominican Republic rịọrọ mgbaghara ma yigharịrị mmemme UNWTO.
Nke a bụ na Mee 27, 2021, na Riyadh, Saudi Arabia
Na mmemme maka oEderede mpaghara mpaghara UNWTO na Riyadh, Saudi Arabia, onye odeakwụkwọ UNWTO Zurab Pololikashvili sonyeere ya Royal Highness Princess Haifa Al-Saud, onye osote minista njem nlegharị anya maka atụmatụ na itinye ego, yana onye minista na-ahụ maka njem nlegharị anya, onye isi ala Ahmed Al Khateeb mepee ụlọ ọrụ na eze.
Ndị minista na -ahụ maka njem nlegharị anya si n'ofe Middle East na mpaghara ụwa niile ọzọ, yana ndị isi sitere na ụlọ ọrụ onwe.
Onye isi oche Hon. Minista Edmund Bartlett sitere na Jamaica na Hon. Onye ozi Minista Najib Balala na-aga emume a, mgbe Zurab Pololikasvili na-eme ka a hụ ihe ngosi na n'ọnụ ụlọ nkwari akụ nke ụlọ nkwari akụ Ritz Carlton 5 dị na Riyadh.
Kedu ihe kpatara Zurab ji kparịa Maribel Rodriguez?
Zurab ji olu ike rịọ ka akpọpụ WTTC ka ọ ghara ịga mmalite nke UNWTO Regional Center na Riyadh, Saudi Arabia na Mee 26, 2021.
N'ihi nke a, onye nhazi gwara onye osote onye isi oche nke WTTC, Maribel Rodriguez ka ọ ghara ịbịa emume a. N'otu oge, Zurab yiri egwu ịhapụ ndị nnọchi anya mmadụ iri asatọ ma ọ bụrụ na a ga -anabata Maribel Rodriguez nke WTTC.
Maribel Rodriguez nọchitere anya onye nnọchi anya Gloria Guevara, onye isi oche World Travel na njem nleta Council (WTTC). Ọ si n'ụlọ ya dị na Madrid, Spain.
Na -anọchite anya ndị otu ụlọ ọrụ nzuzo kacha ibu n'ụwa, WTTC nwere ọrụ dị mkpa n'igosipụta na njikọ nkeonwe na nke ọha nke ụlọ ọrụ njem na -ejikọ.
N'ịbụ onye UNWTO na -anọghị na ya, WTTC nwere ike kpọta ọtụtụ ndị isi site na ngalaba ọha ka ha gaa nzukọ ọgbakọ kwa izu na ọrịa COVID.
Maribel Rodriguez sonyeere WTTC na 2014. Ọ wulitela netwọkụ sara mbara n'ime ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya nke ọha na nkeonwe, na -achịkọta ihe karịrị afọ 20 nke ire, ịre ahịa, nkwukọrịta, na ahụmịhe azụmahịa na Europe na Latin America na ụlọ ọrụ ụgbọ elu na ile ọbịa.
Ọ bụ onye isi azụmaahịa azụmaahịa na onye otu Board maka Travelodge Hotels Spain site na 2008 ruo 2014.
Tupu nke ahụ, ọ nọrọ afọ 11 na ụlọ ọrụ ụgbọ elu, na-enweta ahụmịhe dị ukwuu n'akụkụ niile nke ụgbọ elu azụmahịa, na-ejikwa n'etiti ndị ọzọ iwebata ọrụ ụgbọ elu dị ọnụ ala n'ahịa Southern Europe maka Virgin Express, Go-Fly, EasyJet, na Ryanair. Ọ rụkwara ọrụ maka British Airways maka Spain, Portugal na France. Maribel nwere MBA Executive na Businesslọ Akwụkwọ Azụmaahịa ICADE, nzere na Psychology Mmepụta sitere na Mahadum Salamanca, ma na -ejide Mmemme Nlekọta Ndị Isi maka Njem & Njem Nleta na IESE & JSF. Ọ na -asụ Bekee nke ọma, Portuguese, yana ezigbo ọkwa French na Dutch.
Maribel bụ nwa amaala Spanish izizi nwere ụdị ọkwa a na World Travel and Tourism Council.
Maribel achọghị ịgbakwunye na mgbagwoju anya na -etolite na Ritz Carlton Hotel na Riyadh. Ọ chọghị isonye n'egwuregwu na -eti mkpu, ọ chọghịkwa imenye onye ọbịa ya ihere - Gọọmentị Saudi Arabia.
Mgbe a gwachara ya na a nabataghị ya ọzọ, o nwetara ọmarịcha akụrụngwa ụlọ a Ritz Carlton Riyadh họtel kama. Ọ ka na -ekwu okwu mkpirikpi ya nke a na -eme atụmatụ maka ụbọchị na -esote.
Kedu ihe kpatara mgbaasị Anita Mendiratta tweet ụnyaahụ ji dị mkpa?
N'ezie, mkparịta ego -yana UNWTO -ego maka njem na -esite na Saudi Arabia ụbọchị ndị a.
Ebe onye isi oche WTTC Gloria Guevara na -arụ ọrụ ugbu a maka Gọọmentị Saudi Arabia, Zurab kwesịrị idozi ọnọdụ ọ kpatara na Riyadh.
Onye ndụmọdụ kacha elu na ezigbo ezigbo enyi onye odeakwụkwọ UNWTO Zurab Pololikashvili bụ onye ndụmọdụ South Africa (nke dị ugbu a na London) Anita Mendiratta. Anita abụrụla onye ndụmọdụ kacha elu maka Dr. Taleb Rifai, onye bụbu odeakwụkwọ UNWTO.
Ka ọ dị ugbu a, a nụla ka Dr. Taleb Rifai na -ekwu okwu megide ya Zurab Pololikashvili n'ihu ọha.
Anita bụ onye jiri nwayọ hazie nzukọ n'etiti Zurab Pololikashvili na Julia Simpson ọtụtụ ọnwa gara aga tupu Julia amalite ọrụ ya na WTTC.
Nzukọ a mere na ụlọ oriri na ọ Londonụ Londonụ ndị okomoko n'ọnwa Mee obere oge WTTC kwuputara nhọpụta onye otu Kọmitii Executive International Airlines Group (IAG), Ọ bụ Julia Simpson, dịka Onye isi ala ya na onye isi ya, ga -amalite na Ọgọstụ 15.
Julia arụbeghị ọrụ maka WTTC, mana maka IAG, mgbe ọ zutere Zurab. Enwetabeghịkwa ya maka ọrụ ọhụrụ ya dị ka onye isi maka World Travel and Tourism Council.
N'ezie, Julia amaghị maka esemokwu dị n'etiti UNWTO na WTTC na Anita Mendiratta nọchiri foto ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa anọ tupu Zurab na Anita tweet ya - maka ihe dị iche.
Mgbalị adịgboroja UNWTO iji mezie mmekọrịta ya na WTTC
Ileghara afọ nke nkwukọrịta etinyere na mmemme etinyere n'okpuru ọchịchị UNWTO gara aga, na iduhie ọha mmadụ n'iji foto ochie tinye tweet a, bụ ihe atụ ọzọ mara mma nke otu odeakwụkwọ ukwu si aghọ aghụghọ na -aga n'ihu. Nke a nwere ike ịpụta na fim James Bond.
Onye edemede a zara tweet nke Anita Mendiratta biputere sị:
Site na nkwanye ugwu niile Anita, nke a bụ ọkwa mgbasa ozi dị ọnụ ala.
Mgbe ihe nkiri Zurab kpatara na Saudi Arabia, o doro anya na ọ kpọrọ WTTC asị ma na -atụ egwu na ha na -eme ihe dị mkpa yana gụnyere ngalaba ọha. Ekwesịrị m ikwu ọzọ?